Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1312 lah
Lesona 13 : Rehefa tonga vaovao ny zavatra rehetra
22 - 28 Des. 2012
Toe-javatra mitranga misantatra ny arivo taona
Alahady 23 Des.
Raha ny arivo taona no manamarika ny fiandohan’ny “nofinofin’”Andriamanitra ho an’ny vahoakany, dia ara-dalàna raha miezaka ny hahafantatra isika hoe rahoviana no hiandoha izany sy hoe ho toa inona izany. Ao amin’ny Apôk. 20 no ahitana ny mikasika ny arivo taona; in-6 ny filazana momba azy eo anelanelan’ny and. 2-7. Mba hahafantarana ny fotoan’ny arivo taona àry izany dia ilaina faritana ny toeran’ny Apôk. 20 ao amin’ny bokin’ny Apôkalipsy iray manontolo. Na dia tsy manaraka tsipika mahitsy mamaritra ny fotoana aza ny boky, eto amin’ity tranga ity dia tsy sarotra loatra ny mamaritra hoe rahoviana no manomboka ny arivo taona.
Ampitahao ny 1 Tes. 4:16–18 sy ny Apôk. 20. Manampy eo amin’ny famaritana ny fotoana anombohan’ny arivo taona ny toetoetry ny fitsanganana amin’ny maty, araka izay voalaza ao amin’ireo andalan-teny roa ireo. Amin’ny fomba ahoana? Inona ireo toe-javatra mifandray, hitanao ao amin’ireo andalan-teny ireo?
Ambaran’ny Apôkalipsy mialoha fa, amin’ny fotoana iray mialoha ny fiavian’i Jesôsy fanindroany, dia hisy fahefana telo (ny dragona, ny bibidia, ary ny mpaminany sandoka) hanangona ny firenena hanohitra ny asan’i Kristy sy ny vahoakany (Apôk. 16:13). Amin’ny fotoana hahatongavan’i Kristy (Apôk. 19:11), dia hiangona ny firenena hiady amin’i Kristy, kanefa ao anatin’izany no handringanana ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka (Apôk. 19:19, 20). Manaraka izany, dia resahin’ny Apôk. 20 ny mikasika ny anjara miandry ilay fahefana fahatelo, dia ny dragona izany. Raha iny fa atsangana ho velona indray ireo maty ao amin’i Kristy – fitsanganana voalohany no iantsoana izany eto (and. 5) – hosamborina kosa ilay dragona (dia i Satana izany) ary hatsipy ao anaty lavaka tsy hita noanoa mandritra ny arivo taona (and. 1–3).
Aseho koa ao amin’ny 1 Tes. 4:16–18 sy ny 2 Tes. 1:7–9 ny sasany amin’ireo toe-javatra mahatalanjona ireo. Ireo andalan-teny ireo miaraka dia manampy mba hanazava ny zava-mitranga mialoha ny fiandohan’ny arivo taona.
Mazava ho azy fa mifanojo amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany io fiandohana io. Hatsangana amin’ny maty mba hiaraka amin’ireo velona nitoetra ho mahatoky ireo maty ao amin’i Kristy, dia hakarina ho any an-danitra ireo antokon’olona roa ireo. Ireo ratsy fanahy velona amin’ny fiavian’i Kristy dia ho faty, tsy hahatanty ny “famirapiratany” (2 Tes. 2:8). Ary ny tany, izay foana, dia ho lasa tranomaizina ho an’i Satana, izay hifatotra mandritra ny arivo taona, noho ireo toe-javatra mifampitohitohy. Ny antony omena hanazavana ny fanagadrana an’i Satana dia ny hoe “mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony” (Apôk. 20:3). Maro no mahita fifandraisana an’ohatra eo amin’ny “fandefasana” ilay osilahy ho an’i Azazela amin’ny Andro Fanavotana (Lev. 16:22) sy ireo toe-javatra mihatra amin’i Satana mandritra ny arivo taona.
Ivereno indray ireo toe-javatra aseho ao amin’ireo andininy ireo. Izy ireo dia miresaka mikasika toe-javatra mitranga mihoatra ny herin’olombelona, izay mampiseho ny fahalehibeazan’ Andriamanitra sy ny heriny, ary izany dia mifanohitra amin’ny fahalemen’ny taranak’olombelona sy ny tsy fananany hery. Ahoana no ahafahantsika mihazona mandrakariva izany fifanoherana lehibe izany eo anoloantsika? Nahoana izany no fanafody tsara manasitrana amin’ny avonavona sy ny fiheverana ho mahavita tena?